ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): November 2006
Posted by Anonymous at 1:52 PM2comments Links to this post
Posted by Anonymous at 7:28 PM 1 comments Links to this post
Posted by Anonymous at 4:52 PM2comments Links to this post
တကယ်ကို မှန်ကန်သော ကဗျာပါ.. မြန်မာစစ်သားတိုင်း ဖတ်ပြီးလိုက်နာရင် တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသွားမှာပါ..
Posted by Anonymous at 7:39 PM 1 comments Links to this post
ဘုရား ဘုရား တသက်လုံးသင်လာတဲ့ မြန်မာပြည်အလံကြီးကို ပြောင်းလိုက်ကြပြန်ပြီ။ အခုတင်ထားတဲ့ပုံက အီသီယိုးပီးယားအလံနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့အလံအသစ်ပါ။ စပါးနှံတွေကို ဖြုတ်လိုက်တဲ့ မြန်မာ့အလံကို ကြည့်ပြီး ကျမတို့နားလည်လိုက်တာတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဆန်ရေစပါးရှားပါးပြီး မရှိတော့ဘူးလုိ့ ဆိုလိုလိုက်သလားရှင်။
အလံလည်း မပြောင်းပါနဲ့။ ပြောင်းချင်ရင်တော့ ခုံပေါ်ကသာ ထပေးလိုက်ကြပါ ဘဘကြီးတို့ရယ်။ မြန်မာပြည်ကို အရင်အီသီယိုးပီးယားလို ငတ်စေချင်လို့ အလံကိုများ ဆင်တူထားလိုက်လေသလား။
မြန်မာပြည်အလံအသစ်ကလည်း ကုလားတွေ အစ်မှာ ၀တ်တဲ့ အရောင်တွေကို စပ်ချုပ်ထားသလား (သို့မဟုတ်) အိမ်မှာရှိတဲ့ အ၀တ်အပိုင်းစတွေကိုစုပြီးချုပ်ထားသလား အောက်မေ့ရတယ်။ သွားပြီ ဘဘတို့အားလုံး သွပ်သွားပြီထင်ပါတယ်။
Posted by Anonymous at 5:50 PM4comments Links to this post
Rangoon (dpa) - United Nations Under Secretary General for Political Affairs Ibrahim Gambari Saturday was allowedarare visit with imprisoned Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi, byaruling junta under international pressure to swiftly implement political reforms.
Gambari, who arrived in Rangoon Thursday, met with her at the government's Lake View State Guest House.
Gambari's visit has been timed to fall prior to the UN Security Council meeting which will this year for the first time have Myanmar's on the table for debate over its deteriorating political and human rights situation.
Gambari's assessment will prove important to the session.
Prior to his meeting with the NLD executives, Gambari travelled to Naypyitaw, Burma's new capital situated 300 kilometres north of Rangoon, where he met with the junta's leader Senior General Than Shwe at Naypyitaw.
Gambari reportedly urged the general "to make efforts from every possible point foramore meaningful move to walk the road of dialogue," UN sources said.
I wrote these poem few days ago while I think about cruel militiary groups...
Posted by Anonymous at 5:10 PM 1 comments Links to this post
ရင်ထဲကရွှေနိုင်ငံ (၁) နဲ့ (၂)အပြီး အမှတ်(၃)ကို မရေးတာ ကြာခဲ့ပြီ။ အခုတော့ ရင်ထဲက ရွှေနိုင်ငံအကြောင်းကို လက်သုပ်စုံတစ်ပွဲလို ရေးလိုက်ိပါတယ်ရှင်။
ကျမ စင်ကာပူရောက်ကာစက IELTS ဖြေဖို့အတွက် ကျောင်းတက်ခဲ့တုန်းက တခြားအတန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ မနေ့က ပြန်တွေ့တယ်။ သူနဲ့ကလည်း ၂၀၀၄ကတည်းက မတွေ့တာဆိုတော့ အတော်ကြာနေတာနဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ယောက် ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ရင်း စကားပြောဖြစ်ကြတာပေါ့။ ကျမလည်း စာမေးပွဲအကြောင်း ပြောပြရင်း သူ့အကြောင်းတွေ မေးမြန်းကြည့်တော့ သူလည်း စိတ်ညစ်စရာတွေ ရင်ဖွင့်တယ်။ နောက် စကားကြုံရင်း သူက မြန်မာပြည်ကို သူအလည်သွားခဲ့ကြောင်းပြောတော့ ကျမလည်း မျက်ခုံး၂ဖက်မြင့်သွားတယ်။ ဘုရား ဘုရား ငါတော့ ဘာတွေကြားရအုန်းမလည်းဆိုပြီး ရင်တော့လေးမိသား။ သူက မြန်မာပြည်က သိပ်လှကြောင်းပြောတော့ သဘောကျလို့ မဆုံးခင် သူဆက်ပြောတဲ့စကားက `မင်းတို့နိုင်ငံက တော်တော်လေး ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာ ငါအရင်ကတည်းက သိပါတယ်။ ငါထင်တာက အစိုးရလညး သိပ်မကောင်းဘူး။ နောက် ရေမြေတောတောင်လည်း ပါနေတယ်လို့ထင်နေတာ။ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးလည်း ငါမြင်ခဲ့တယ်။ စိုက်ခင်းတွေ ရေနံတွင်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိခဲ့တယ်။ သစ်တော အကုန်ရှိနေတာ ဘာများကျန်သေးလည်း။ နိုင်ငံကရွှေပါ´တဲ့။ သူသိချင်တာတွေမေးတော့ ကျမလည်း ဒီပေါင်ကိုပြန်လှန်ထောင်းရမယ်ဆိုတာ နားလည်လိုက်ပါတယ်။ သူက အစိုးရ သိပ်မကောင်းတာ လီကွမ်ယုတို့ မကောင်းသလိုမျိုးထင်နေတာကိုး။ လီကွမ်ယုထက် အဆ ၁သိန်းဆိုးတဲ့ မြန်မာပြည်အစိုးရကို အခုမှသိသူအဖို့ အတော်လေးလန့်သွားမှာပေါ့။ ငပလီကမ်းခြေက သိပ်လှတယ်လို့ သူပြောတာက နဂါးပလီက သိပ်လှတယ်တဲ့။ စာလုံးပေါင်းပြင်ပေးရင်း သူဆက်ပြောတာက `မင်းတို့ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာ လူကူးမျဉ်းကြားက ဘာလုပ်ဖို့အတွက်လည်း´လို့ ဆက်မေးပါတယ်။ ကျမလည်း အော်တိုသဘောပေါက်လိုက်ပါပြီ။ ဆူးလေလမ်းမှာ လူကူးမျဉ်းကြားကနေ သူက ကူးဖို့လုပ်တော့ စင်ကာပူလို့ ထင်နေခဲ့မှာပေါ့။ ဟိုမှာ ကားတွေက မရပ်ပေးတော့ သူလည်း ကြောက်ကြောက်နဲ့ သူများကူးမှ အသကုန်ပြေးကူးခဲ့ရတယ်လို့ ရယ်ရယ်မောမောပြန်ပြောပေမယ့် ကျမတော့ မျက်နှာနီရဲနေပြီ။ `ရန်ကုန်မှာ အိမ်သာဝင်ချင်တာ အိမ်သာရှာမရတာတော့ တော်တော်မကောင်းဘူး´လို့ သူပြောတော့ အမြဲ စကားကို ဒတ်ခနဲပြန်ပြောတတ်တဲ့ကျမ အဲဒီတစ်ခေါက် အသွားပါတယ်။ ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိတော့ သွားလေးပဲပေါ်အောင်မချိပြုံးလေးနဲ့ ခေါင်းညိတ်လိုက်ရတယ်။ စင်ကာပူမှာတော့ အပေါဆုံးက အိမ်သာနဲ့ဖုန်းပါ။ နေရာတိုင်းမှာ Toilet တွေက ရှိနေပြီး ဆက်သွယ်ရေးအတွက် ဖုန်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာအပေါဆုံးဖြစ်အောင် ထားထားပါတယ်။ နိုင်ငံသေးတော့ သူတို့လုပ်နိုင်တာကိုတော့ ဘာမှမပြောလိုပါဘူး။ မြန်မာပြည်မြို့လယ်ခေါင်မှာ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်လမ်းဘေး အိမ်သာမရှိတာတော့ ဒွတ်ခ။ သမီးမင်္ဂလာဆောင်တာတော့ ၁ သန်းကုန်အောင်ဆောင်တယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံအရှက်ကိုတော့ ကမ္ဘာကသိအောင် ခွဲရက်လေစ နအဖရယ်။ မြန်မာပြည်က ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကိုကြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းက မင်းတို့နိုင်ငံက ရွှေအတော်ပေါတယ်လို့ ပြောတဲ့တချက်လေးကိုပဲ ကြည်နူးခဲ့ရပါတယ်။
သူငယ်ချင်းနဲ့လမ်းခွဲပြီး အိမ်ပြန်လာတော့ အတွေးတွေ အများကြီးရမိတယ်။ သူများနိုင်ငံသားတွေနဲ့ စကားချင်းယှဉ်ပြောတိုင်း အောက်ကျလိုက်ရတဲ့ ဒီမျက်နှာ ဘယ်နားသွားထိုးထည့်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ သောကြာနေ့ညနေတိုင်း စာကြည့်တိုက်မှာ ကျမ စာသွားဖတ်ပါတယ်။ နယူးရောက်သတင်းစာတွေအပါအ၀င် နိုင်ငံစုံသတင်းစာတွေ စာကြည့်တိုက်မှာရတဲ့အပြင် တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အဆောက်အအုံထဲမှာ အဲကွန်းနဲ့အေးဆေး စာဖတ်ရတာကို ကျမနှစ်ခြိုက်တယ်။ စာကြည့်တိုက်မှာ သောကြာနေ့ညနေတိုင်း စာလာဖတ်တဲ့ ဘော်ဒါတွေနဲ့ တခါတုန်းက စကားတိုးတိုးပြောရင်း အန်တီတယောက်က မင်းတို့နိုင်ငံသတင်းစာ မရှိဘူးလားတဲ့။ ကျမလည်း `ငါတို့နိုင်ငံသတင်းစာက နာမည်ကြီးလွန်းပြီး ရောင်းအားသိပ်ကောင်းတော့ ပြည်ပကို ဖြန့်ဖို့မလောက်ဘူး´လို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြောလိုက်တော့ ဘေးက မြန်မာသူငယ်ချင်းက ရီနေပါတယ်။ အန်တီကြီးကလည်း ကျမ လျှောက်ပြောနေတာကိုမသိဘဲ အင်တာနက်ကနေ ဆွဲလို့မရဘူးလားတဲ့။ ကျမလည်း `အင်တာနက်ပေါ်က သတင်းစာတွေက ငါတို့ဘာသာစကားဆိုတော့ မင်းနားမလည်ဘူး´လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ သတင်းစာကို သူတို့မသိသေးလို့ပါ။ သိရင် တသက်လုံးလှည့်ကြည့်တော့မှာတောင် မဟုတ်ဘူး။ အစိမ်းနဲ့ အ၀ါပဲ ရှိတဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်လုံးဝမရှိတဲ့ သတင်းစာက စာအုပ်မျက်နှာဖုံးလုပ်ဖို့လောက်ပဲ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာနေတုန်းကဆို ၈နာရီထိုးတာနဲ့ အားလုံးက TV ကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့တွေမြင်ရတာ ကျက်သရေ တုံးလွန်းလို့ပါ။
စကားမစပ် --- မောင်လေး ထူးမြတ်ဘလော့ခ် စီဗောက်စ်က ဗုံးကျဲခံထားရတဲ့ ကိစ္စတွေ တခါတည်း ထည့်ပြောသွားအုန်းမယ်။ သူ့ဘလော့ခ်တောင် မရောက်တာ အတော်ကိုကြာခဲ့ပေါ့။ ဘာတဲ့ လင်းးလက်မျက်လုံးထဲ အခုထိမြင်ယောင်နေတာ လူတစ်ယောက်ပြောသွားတဲ့ ` ငါလည်းစစ်သားပဲ။ မင်းတို့ပြောနေတဲ့ စစ်သားမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့နိုင်ငံမှာ စစ်သားတွေက သူများတွေနဲ့မတူတဲ့ လမ်းဖောက်တာတွေလုပ်တယ်။ ငါသိတာတော့ ပြည်သူတွေက ငါတို့ကိုမြင်ရင် ဟိုဟာလေးကူညီပါ ဒါလေးရွက်ပေးပါ´တဲ့။ အမည်မဖော်လိုသူ ဘယ်တိုင်းပြည်ကမှန်းမသိတဲ့ စစ်သားတစ်ဦးပြောသွားချက်ပါ။ ကျမ အခုမှအချိန်ရတာနဲ့ အဲဒီစကားကို အခုရှင်းမယ်နော် ကိုအ၀ှာ။ ကျမတို့အားလုံးရေးသားချက်တွေမှာ စစ်သားအားလုံးလို့ မဆိုလိုခဲ့ပါဘူး။ စစ်သားတွေဆိုသော အသုံးအနှုန်းနဲ့ စစ်သားအားလုံးဆိုသော အသုံးမှာ သိပ်ကိုကွာပါတယ်။ စာတတ်သူဆိုရင် နားလည်မှာပါနော်။ ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုပ်ဆိုသလိုပဲ။ အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးက လူတွေစိတ်ဓါတ်ကိုဖျက်ဆီးပြီး တိုင်းပြည်ကိုချစ်သော တကယ့်စစ်သားတွေအားလုံးကိုပါ ဖျက်ဆီးခဲ့တော့ အများစုက ကျမတို့ပြောသလိုစိတ်မျိုးဝင်နေတယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ အခုလို ထူးမြတ်ဘလော့ခ်မှာ လာပြောသွားတဲ့ ကိုအ၀ှာစစ်သားက အိမ်တွင်းပုန်းထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမတို့ပြောနေတာတွေ နားမလည်တာပါ။ တစ်တပ်လုံးနီးပါး ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး မကောင်းတော့ ကောင်းသူတွေလည်း ဒီလိုပဲထင်ခံရမယ်ဆိုတာ သဘာဝပါ။ ကျမ ဥပမာပေးမယ်။ ဥပမာ -- ရှင်က သူခိုးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ တအိမ်တည်းနေတယ်ဆိုပါစို့။ ရှင့်ကို ပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်ရင် သူခိုးလေးလို့ပဲ သတ်မှတ်ကြမှာပဲလေ။ ရှင်တို့ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ ရှင်တို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာ ဘေးက အကုန် ဘယ်သိမှာလည်းရှင်။ ဒီပုတ်ထဲနေရင် ဒီပဲလို့ပဲ အများစုက သတ်မှတ်ကြပါပဲ။ ဒါကို ရှင်က မကျေနပ်ရင် ဘာလုပ်မှာလည်း။ ထွက်လိုက်ပေါ့။ ထွက်ရင်လည်း စစ်ပြေးပဲလေဆိုတာ မမေ့နဲ့အုန်း။ အဲဒီတော့ ၀ဋ်ရှိသမျှ ကောင်းသောစစ်သားတွေလည်း ခံလိုက်ကြပါအုန်း။ စစ်သားတွေ လမ်းဖောက်တယ် တံတားဆောက်တယ်ဆိုတာ အောက်ခြေက စစ်သားတွေပဲလေ။ သူတို့ကုသိုလ်တော့ရပါတယ်။ ဒါကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်ပမှာ ဒါမျိုးတွေမရှိဘူး မသတ်မှတ်ပါနဲ့။ ပြည်ပမှာ လမ်းဖောက်ဖို့က စစ်သားတွေ မလုပ်ပါဘူး။ စည်ပင်သာယာက သူ့အလုပ်သူ ကျေပွန်အောင်လုပ်တဲ့အတွက် မလိုအပ်တာကို အပိုမရှုပ်ကြပါဘူး။ ဒီက လူကို လူလိုသဘောထားပြီး အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်က မြန်မာလူမျိုးကို လူလို့မသတ်မှတ်တာ အားလုံးသိပါတယ်ရှင်။ ရှင်တို့စစ်သားကောင်းတွေ ပြောစကားအရ မြန်မာပြည်မှာ စစ်သားတွေမြင်ရင် အမေအိုတွေက ဟိုဟာလေးကူညီပါပြောသောစကားဆိုရင် ရှင်တို့နဲ့အတူ သူတို့လည်း မြေကြီးလိုက်သယ်နေရပုံပဲ။ ဒီမှာ ဘယ်မြေကြီးမှသယ်စရာမလိုတဲ့အတွက် အဲဒီစကားကိုမသုံးဘူးဆိုတာ နားလည်ထား ကိုအ၀ှာရေ။ တအိမ်ကိုတယောက် ထွက်ပြီးမြေကြီးကျင်းတူးရမယ်ဆိုသော ပြဿနာကြောင့် မစုစုနွေးတစ်ယောက် ကမ္ဘာကျော်သွားတယ်ဆိုတာ မမေ့နဲ့နော်။ အဲဒီလိုများများဖိနှိပ်လေ မစုစုနွေးလို လူတွေ အများကြီးထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ မတွေးတတ်တဲ့ ရှင်တို့ဦးနှောက်တွေကို မစင်တွင်းထဲ စိမ်ထားချင်ပါ့။
ကျမ General ကိုပြောမယ်။ မြန်မာပြည်စစ်တပ်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း အကြီးအကဲတွေကို နမူနာအဖြစ်ကြည့်ပါ။ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး နိုင်ငံခြားဘာသာစကား တတ်ပါသလား။ ပညာရေးဌာနအကြီးအကဲ ဘယ်နိုင်ငံက အသိမှတ်ပြုထားသော ဘွဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မြန်မာပြည်ပညာရေးကို ချုပ်ကိုင်ထားပါသလည်း။ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနက ထိပ်ဆုံးအကြီးအကဲက Harvest University ကများ ဆင်းလာပါသလား။ သူများနိုင်ငံအစိုးရတွေ ကမ္ဘာနဲ့ယှဉ်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်က သန်းရွှေက ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ Guide စကားကိုနားထောင်ပြီး လိမ်ဖို့အသင့်ပါပဲ။ ကိုမောင်အေးကတော့ အရက်ကြားမှာ မျောနေတာပါပဲ။ ဒါက ထိပ်ပိုင်းပါ။ အောက်ပိုင်းကလူတွေအဆင့်ကနေ ကျမ ပြန်ထောက်ပြမယ်။ စစ်သားတွေထဲမှာ ဆရာဝန်တွေ ပါသလား။ အင်ဂျင်နီယာတွေပါသလား။ မြန်မာပြည်ဇတ်ကားတွေမှာတောင် ရိုက်ကြတယ်နော်။ ဖဲရှုံးလို့ ထွက်ပြေးရင်း စစ်ထဲရောက်သွားသောလူ ၊ ဆိုးလွန်းလို့ မိဘတွေက စစ်တပ်ထဲ ထည့်ခံရသောသူ ၊ ကြက်ခိုးရင်း စစ်ထဲရောက်သွားသူတွေပဲ များပါတယ်။ အများစုက ဒါတွေချည်းပါပဲ။ မြန်မာစစ်တပ်ကို သိပ်ချစ်လွန်းလို့ သိပ်ကိုထူးချွန်သော ဦးနှောက်ရှိသူများ ဘယ်သူများ စစ်တပ်ထဲဝင်သွားသလည်း။ ရှိရင် လာပြပါ။ ဒိုင်းဆုပေးလိမ့်မယ်။ အပေါ်မရောက် အောက်မရောက်ဘဲ အလယ်အဆင့်မှာ ပညာတတ်သူများလည်း ရှိပါတယ်။ ကျမနဲ့ အပြင်မှာ တော်တော်ခင်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ဟိုးတုန်းကတည်းက စစ်တပ်ထဲ ရောက်သွားခဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က နအဖကို မုန်းပေမယ့် စစ်ပြေးမဖြစ်ချင်တဲ့ဘ၀မှာ သည်းခံပြီး နေနေရတာပါပဲ။ တကယ်ကို မှန်ကန်သူဆိုရင် ဒီလိုပြောပါတယ် `ပြည်သူတွေက စစ်သားတွေကို ကြည့်တဲ့အကြည့်ကို ကျွန်တော်တို့တအားခံစားရတယ်ဗျာ´တဲ့။ မယုံရင် ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီး ဘတ်စ်ကား တယောက်တည်းသွားစီးကြည့်။ အားလုံးက ရှင်နဲ့ခပ်ခွာခွာနေလိမ့်မယ်။ ထိရမှာ သိပ်ကိုရွံကြလိမ့်မယ်။
အရင်တစ်ချိန် ခင်ညွန့်ဆိုသော အခြောက်ကောင်းစားချိန်က စသုံးလုံးထဲမှာ ကျမဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ အထက်အရာရှိအကြောင်းကို သိပြီးချိန်မှာ ရာထူးမြင့်သူများအဆင့်ကို တန်းကနဲ သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်တပ်မှာ ခိုင်းတာလုပ် ၊ ကျွေးတာစား ၊ အမိန့်ကိုနာခံသူဆိုရင် အပေါ်ကလူတွေက သိပ်ကြိုက်တယ်။ မြန်မာပြည်စစ်တပ်စနစ်က `မင်းအမှန်ကိုသိပြီးတကယ်ကိုထူးချွန်နေလား ဂျောင်း ၊ ဟိုကောင် ခိုင်းတာအကုန်လုပ် ဘာမှမသိ ဘာမှပြန်မပြောသော ငတုံးလား လာခဲ့ ရာထူးမြင့်မြင့်ယူ´ ဆိုသော စနစ်ပါပဲ။ ထောက်လှမ်းရေးက အရာရှိဆိုလို့ အဖေနဲ့စကားပြောနေတာ နားထောင်မိပါတယ်။ ဘာကိုမှ အသိဥာဏ်မရှိသူဆိုတာ အဖေနဲ့ပြောနေတာ နားထောင်ကတည်းက တန်းကနဲ သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။ ကျမအဖေက ကျမကို အဲဒီတုန်းက `တွေ့လားသမီး ။ အဲဒါ အရာရှိတဲ့´ ဆိုပြီး အထာနဲ့ပြောတော့ ကျမက ရီလိုက်ပါတယ်။ ကျမတို့အိမ်မှာတော့ စည်းကမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ခြံရိပ်ကိုတောင် စစ်သားမနင်းရ။ အမျိုးတွေထဲက သူလည်းမလာရ။ အပြင်မှာဆို စကားပြောတယ်။ အိမ်ကို အလာမခံပါဘူး။ စစ်သားတစ်ယောက်လာရင် ပတ်ဝန်းကျင်က အဲဒီအိမ်ကိုစိမ်းသက်သက်ဆက်ဆံတဲ့အပြင် ခပ်ခွာခွာနေတာကို ကျမတို့မလိုချင်ပါဘူး။
ရင်ထဲကရွှေနိုင်ငံက လောလောဆယ်တော့ အညစ်ကြေးတွေဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ ယုတ်မာမှုတွေက ပြောမကုန်နိုင်အောင် ဖြစ်နေတာကို ကျူပ်တို့အားလုံး လျစ်လျူရှုနေလို့မရပါဘူး။ မိမိနဲ့သက်ဆိုင်ရာ ၊ မိမိတတ်နိုင်ရာဘက်ကနေ အကောင်းဆုံးထိ ကြိုးစားသွားရမယ်ဆိုတာ ရင်ထဲမှာအားလုံးရှိနေပါစေဟု တောင်းဆုပြုရင်း အမှန်ပြောသူ ရေးသူများကို မကျေနပ်သူများ တိုင်နဲ့ခေါင်းသာ ဆောင့်လိုက်ပါဟု အကြံပြုရင်း
Posted by Anonymous at 4:58 PM2comments Links to this post
ကနေဒါကမမပြောသွားတဲ့စကားတစ်ခွန်းကို ပြန်ပြောဖို့အချိန်မရခဲ့တာနဲ့ အခုမှ ဆွေးနွေးပါတော့မယ်။
သူပြောတာက ` လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် နိုင်ငံရေးလည်း အရေးမကြီးပါဘူး။ စီးပွားရေးလည်း မလိုပါဘူး။ သေတတ်ဖို့နဲ့ ဘုရားသခင်အလိုကျအတိုင်းပါပဲ´တဲ့။ ကျမကို ဘာသာမဲ့နေလားလို့ ပြောခဲ့တုန်းက ကျမ ပြန်မဖြေခဲ့တာ မဖြေချင်လို့ပါ။ လင်းလက် ဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်လည်းတဲ့။ ဟုတ်ကဲ့ ကျမ ဒိတ်ထိပါ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းလည်း သွားပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းလည်း တခါတလေ သွားပါတယ်။ ဗလီတော့ ဘယ်သူမှ မခေါ်လို့မတက်ဖူးသေးပါဘူး။ ဘာသာရေးဆိုတာ မိမိ အလိုကျတိုင်း ကိုးကွယ်ဖို့ပါပဲ။ ကျမက ဘာသာရေးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေသူမဟုတ်တဲ့အတွက် ဘာသာရေးဆိုရင် လုံးဝမဆွေးနွေးတာ ဆောရီးပါ။ ကျမက FREEDOM အတွက်ပဲ စိတ်ထားရှိတာပါ။ ဘယ်ဘာသာကိုပဲ ကိုးကွယ်ကွယ် နေရာတိုင်းမှာ ဘာသာရေးအတိုင်း အားလုံးကို ခွင့်လွှတ်လို့မရဘူးလေ ကနေဒါက မမရယ်။ ကိုယ့်ပစ္စည်းခိုးလို့ ခွင့်လွှတ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ချောင်းရိုက်လို့ သည်းခံမှုနဲ့ ခွင့်လွှတ်လို့ရပါတယ်။ တတိုင်းပြည်လုံးကို ငတ်အောင် လုပ်နေတဲ့ ၁၈နှစ်ကျော် ယုတ်မာနေခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်တွေကို မမက ခွင့်လွှတ်ချင်လွှတ်ပါ။ ကျမတို့တော့ အဲဒီလို စိတ်မျိုး မထားနိုင်သေးပါဘူးရှင်။ ကျမ အမုန်းဆုံးက တစ်ဖက်တည်းကနေ ကြည့်သော သူမျိုးပါပဲ။ တကယ်လို့များ မိတ်ဆွေ သင်က မြန်မာပြည်မှာ စားစရာမရှိ ၊ စစ်တပ်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေခံယူနေရပြီး မတရားမှုတွေအောက် လူဖြစ်နေရရင် `ခွင့်လွှတ်ပါတယ် သန်းရွှေလေးရယ်´ လို့ အော်နိုင်ပါ့မလားဟင်။ ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ အတိုင်းအတာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး သေတတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်လို့ လာပြောတော့ ရီချင်ပါတယ်။ အဲဒီစကားက ဘဘသန်းရွှေတို့ကိုသွားဟောပေးပါ။ ကျမတို့က ခရစ်တော်မှာ အိပ်ပျော်ရမယ့်အချိန် မရောက်သေးသလို အလ္လာရဲ့အမိန့်တော်လည်း ခံယူချိန်မရောက်သေးသလို မကွယ်လွန်သေးပါဘူးရှင်။
မှတ်ချက်။ ကျမ မည်သည့်ဘာသာကိုမှ ဘာမှမပြောပါ။ ယခုပို့စ်မှာ ဘာသာရေးနှင့်လာရှင်းနေသော သူများကို တိုက်ရိုက် ပြောခြင်းပါ။